Ihe 10 Agencylọ Ọrụ gị na-efu nke na-aga n'ihu na-emerụ azụmaahịa gị | Martech Zone
Ternyaahụ, enwere m obi ụtọ ịme otu ogbako na mpaghara ahụ Spetù Na-ekwu Okwu Mba, edu Aha ya bụ Karl Ahlrichs. Maka ndị na-ekwu okwu n’ihu ọha, ọ dị oke nkpa inwe ọnụnọ weebụ yana ọtụtụ ndị bịara ya juru anya ịhụ ụfọdụ nnukwu oghere na atụmatụ ha.
Ọtụtụ n'ime nke a bụ n'ihi na ụlọ ọrụ agbanweela nke ukwuu… na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-adịghị nọgidere na. Y’oburu na itinye webusaiti, odika imepe ulo ahia n’etiti onweghi ihe. Ọ nwere ike maa mma, mana ọ gaghị ewetara gị ndị ahịa ọ bụla. Ndị a bụ atụmatụ 10 nke ụlọ ọrụ gị ga-etinye mgbe ị na-emepe saịtị gị:
Nchịkọta Njikwa ọdịnaya - ọ bụ ihe nzuzu maka ụlọ ọrụ ijide ndị ahịa ha ọzọ maka mmelite na ndozi mgbe ọtụtụ usoro njikwa ọdịnaya dị egwu. Usoro njikwa ọdịnaya na-enye gị ohere ịgbakwunye na dezie saịtị gị ka ịchọrọ, mgbe ịchọrọ. Gị gị n'ụlọnga ga-enwe ike itinye gị imewe gburugburu fọrọ nke nta ka ọ bụla siri ike ọdịnaya management usoro 'theming engine.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị anaghị aghọta isi ihe njikarịcha njin ọchụchọ, ịchọrọ ịchọta ụlọ ọrụ ọhụrụ. Ọ dị ka iwulite saịtị na enweghị ntọala. Search engines bụ akwụkwọ ekwentị ọhụrụ… ọ bụrụ na ịnọghị na ya, atụla anya na onye ọ bụla ga-achọta gị. M ga-akwagide na ha ga-enwe ike inyere gị aka ịmata ụfọdụ isiokwu isiokwu ezubere iche.
Analytics - I kwesiri inwe nghọta di nkpa banyere nchịkọta na otu esi ah ihu peeji na ihe ọdịnaya ndi nleta gi na-etinye uche ha ka i wee nwee ike imeziwanye saịtị gi n’oge.
Gingde blọgụ na vidiyo - ịde blọgụ ga-enye ụlọ ọrụ gị ụzọ isi na-ekwupụta ozi ọma, zaa ajụjụ a na-ajụkarị ma kesaa ihe ịga nke ọma na atụmanya gị na ndị ahịa yana ịnye ha ụzọ ịgbaso, site na ndenye aha, na ịkọkọrịta na nloghachi. Ekwesịrị ịkpọsa ndepụta gị na ibe ọ bụla. Vidiyo ga-agbakwunye ụda na saịtị gị - ọ na-eme ka nkọwa nke echiche siri ike dị mfe karị ma na-enyekwa ndị mmadụ ezigbo ụlọ ọrụ gị nnukwu okwu.
Kpọtụrụ Ụdị - Ọ bụghị mmadụ niile ga-achọ ịkpọtụrụ ekwentị ma kpọọ gị, mana ha ga-edekarị gị site na mpempe akwụkwọ ịkpọtụrụ gị. Ọ dị mma ma ọ dị mfe. Ha adịghị mkpa ka mmemme ya… ha nwere ike nanị nweta gị na akaụntụ na onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị,Mpempe akwụkwọ , na ị ga-agbago ma na-agba ọsọ!
Ntinye ekwentị - Ebe nrụọrụ gị kwesịrị ịdị ukwuu na ngwaọrụ mkpanaka. Ọ dị mfe ịmepụta CSS mobile (stylesheet) nke na-enyere ndị ọbịa aka na-agagharị na saịtị gị, chọta ọnọdụ gị, ma ọ bụ pịa njikọ iji mee oku ekwentị.
Twitter - Gị gị n'ụlọnga kwesịrị iru a gbara ọkpụrụkpụ ndabere maka gị Twitter peeji nke na ọkụ na-ewere gị na saịtị. Ha kwesiri ijikọ blọgụ gị site na iji ngwa ọrụ dịka Twitterfeed ka ị na-akpaghị aka melite mmelite blog gị. Agencylọ ọrụ gị kwesịrị ijikọ twitter na saịtị gị, ma ọ bụ site na akara ngosi mmekọrịta dị mfe ma ọ bụ site na igosipụta mmemme gị kachasị ọhụrụ na saịtị gị.
Facebook - agencylọ ọrụ gị kwesịrị itinye akara gị na peeji Facebook omenala ma jikọta blog gị site na iji ndetu ma ọ bụ Twitterfeed.
Ibe akwukwo - Oku na-eme nke ọma na saịtị gị ga-enye ụzọ ịbanye na ndị ọbịa gị na ebe ọdịda ga-agbanwe ha ka ha bụrụ ndị ahịa. Agencylọ ọrụ gị kwesịrị iso gị kwurịta nhọrọ gbasara otu ị ga-esi na-eduzi ibe gị na ibe gị - site na ngosi, akwụkwọ akụkọ, ụdị ozi ndị ọzọ, akwụkwọ ntanetị, nbudata, ọnwụnwa, wdg.
email Marketing - Ọbịa gị na ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị njikere mgbe niile ịzụta… ụfọdụ n'ime ha nwere ike chọrọ ịrapara gburugburu maka oge tupu ha ekpebie ịzụta. Akwụkwọ akụkọ kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa nke na-atụle ozi dị mkpa na nke oge kwesịrị ịbụ naanị aghụghọ ahụ. Gị gị n'ụlọnga kwesịrị ị elu na-agba ọsọ na a ewere email na a siri ike onye na-enye ọrụ email, dị ka CircuPress. Ihe ntanetị gị nwere ike ịkwọ ụgbọala na-akpaghị aka kwa ụbọchị site na sistemụ ha ka ị ghara ịbanye.
Fọdụ ụlọ ọrụ nwere ike ịlaghachi na-arụ ọrụ a niile ma na saịtị na saịtị… Achọghị m ịma. Oge eruola mgbe ha na ndị ahịa ha rutere ma ghọta na ịgbanye weebụsaịtị mara mma ezughị. N'oge a, atụmatụ gị gafere saịtị gị ma gụnye mgbasa ozi mmekọrịta, njikarịcha njin ọchụchọ, na usoro ịzụ ahịa inbound.
Agencieslọ ọrụ ige ntị: Ọ bụrụ na ịnweghị njikere ndị ahịa gị zuru ezu leverage na weebụ, ị na-ewere ego maka ọrụ ịnyịnya ibu ọkara. Ndị ahịa gị na-atụkwasị obi na ị wuru ha ọnụnọ weebụ yana atụmatụ na-eme ka ha nwee azụmaahịa.
Tags: ụlọ ọrụgị n'ụlọngaAnalyticsịde blọgụkọntaktị ụdịusoro njikwa ọdịnayaemail MarketingFacebookmbido peeji nkenjikarịcha ekwentịsearch engine njikarịchaTwitterahịa vidiyovlogging
Sep 20, 2010 na 8: 00 AM
Echere m echiche na ihe a niile bụ ụkpụrụ ugbu a. Ọ dị nwute karịsịa na ụfọdụ ụlọ ọrụ anaghị eji ezigbo usoro njikwa ọdịnaya!
Sep 20, 2010 na 8: 06 AM
Ekwenyere Michael! O di nwute na anyi ka nwere ulo oru abuo nke na aru oru na niche ha ma ghara ighota ahia a choro ma obu ohere ebe ha adighi agbaso usoro ntaneti, nyocha na mgbasa ozi. Nakwa, ụfọdụ azụmaahịa ga - ata ụta - ụfọdụ azụmaahịa amataghị ikike nke nnukwu atụmatụ nwere inye, yabụ ha na-aga ahịa maka saịtị dị ọnụ ala ha nwere ike ịzụta.
Sep 21, 2010 na 10: 24 AM
Na agụụ niile àgwà ndị a nwere ezi uche, na dịka ụlọ ọrụ weebụ anyị na-enye ha ndị ahịa anyị, na ọbụna karịa, dị ka ngwa mkpanaka ma ọ bụrụ na ọ dabara na ụdị azụmaahịa ha. Na nwute, ụfọdụ azụmaahịa na-eleba anya na blọọgụ ma ọ bụ na-ejikwa saịtị ha dị ka ibu, yabụ ọtụtụ ga-ahọrọ ịghara ịga n'ụzọ a. Echiche ha bụ, gịnị kpatara ị ga-asụ ngọngọ na-anwa itinye ihe oyiyi ọhụrụ na weebụsaịtị anyị ma nweta ya maka awa ole na ole, mgbe m nwere ike ịkwụ onye nrụpụta m oge 15.
N’oge na-adịghị anya otu enyi m wepụtara websaịtị nke ya, mgbe m jụrụ ya ogologo oge o were, ọ maghị ma ọ karịrị awa 100 nke nyocha, ọzụzụ na WordPress na mmejuputa, na mmezigharị-ọ dị mma, ọ bụrụ na ị tụgharịa nke ahụ n'ime oge elekere ya dị ka onye na-enye ọzụzụ onwe gị (ihe dị ka $ 90), nke na-agbakwunye na ezigbo ego.
Yabụ, ebe akụkụ ndị a niile nwere ezi uche, ọtụtụ ndị nwere azụmaahịa, gụnyere nke m gwara taa, lee ịde blọgụ wdg dịka ọrụ ọzọ, na nke ha enweghị oge ha ga-eme kwa ụbọchị. Ya mere, ọ bụrụ na ha nwere onye nrụpụta ha na-arụ ọrụ ahụ ma kpochapụ ya na ndepụta listi ha, a naghị m akpọ ya njide ejidere ya – M na-akpọ ya na ọgụgụ isi jiri njikwa oge.
Sep 21, 2010 na 3:59 PM
Kpamkpam kwenyere, Preston. Ihe m na-ekwu bụ na discusslọ ọrụ anaghị ekwurịta ohere maka ndị ahịa ha ịde blọgụ ma nyochaa ma ọ bụ atụmatụ dị irè. Nke ahụ adịghị mma.
Sep 22, 2010 na 7: 18 AM
Eeh, e kwesịrị ịtụle ma tụlee nke ọ bụla n’ime isi ihe ndị a – ịhapụ iwepụ ha bụ nnukwu mmejọ. Mgbe ụfọdụ ọ dịka ọ na-adị m ka m rịọ ndị ahịa ka ha gbadaa n'okporo ụzọ SMM, mana imirikiti azụmaahịa m na-ahụ anaghị achọ imetụ ya aka-naanị mgbe onye anaghị 'ere' mmejuputa iwu nke ọrụ ahụ gosiri ha ihe nwere ike ịpụta, kwuo enyi, ka ha na-egosi mmasị.
Echere m ịchọta ọnụ na akụ na ụba a, nke ọ bụla n'ime isi ihe ndị a bụ ihe dị mkpa maka azụmahịa ọ bụla, mana ọ dị mwute na a ka nwere ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ebe nrụọrụ weebụ mbụ na-eti mkpu maka ihu ọdịda, oku na-aga ime ihe, na blog – ma ndị ọchụnta ego ahụ na-asị "anaghị m enweta azụmahịa na thentanetị." Well, lol, no wonder… 😉